Kulan balaaran oo ay ka soo qaybgaleen Waxgarad iyo Odoyaal ka tirsan Beesha Gaal-Jecel ayaa ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Kulankaan oo ay ka dhex muuqdeen rag magac weyn ku leh Guurtida Beesha GaalJacel ayaa ulajeedada ka dambeysa qabsoomidiisa waxa lagu sheegay in ay tahay sidii Shuruuc loogu sameyn lahaa Guddi dhawaan ay Beeshu soo xulatay oo iyana iska dhex doortay guddoomiye horkaca, waxa uuna Guddiga Beeshu fadhigooda isku afgarteen in si deg deg ah loo sameeyo shuruuc uu yeesho golaha.
Kulankii Beesha waxaa khudbado ka jeediyey mas�uuliyiin badan, waxaase khudbad dheer oo arrimo badan taabaneysay jeediyey Guddoomiyaha Guddiga sare Beesha Gaal-Jecel Dr Isaaq Xaaji Nuur (Ameeriko), waxa uuna Guddoomiyuhu sheegay in marka Shuruucdaani miiska la soo saaro ay sida ugu dhaqsiyaha badan u hirgeli doonto, isagoo hoosta ka xariiqay in Beesha Gaal-Jecel door muhiim ah ka qaadan doonto masraxa dib u heshiisiinta Ummadda Soomaaliyeed.
�Golaha cusub ee Beesha Gaal-Jecel, waxaa loo aasaasay sidii nabadda iyo waliba kor u qaadida dhiiragelinta qaran Soomaaliyeed oo dib u istaaga uu qaybtiisa u qaadan lahaa, taasina waxgaradka Beeshu dhamaantood madaxa ayay u luleen, waxaana filayaa in dadweynaha Beesha Gaal-jecel middaasi iyana door weyn ka cayaari doonaan� ayuu yiri Guddoomiyaha cusub oo mar la weydiiyey hawsha baaxadda ee hor taala dhaqaalaaha lagu socodsiin karayo, waxa uuna farta ku goday in ay leeyihiin Doolar Daaqaya (Xoolaha Nool) oo uu sheegay in Illaah ku maneystay.
Guddoomiyaha ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in guddiga uu socdaalo ku tagi doono gobalada J/hoose. J/dhexe iyo Sh/hoose, Sh/dhexe oo Hiiraan si afkaarta Beesha Gaal-Jecel la isugu xiro.
Guddiga Beesha Gaal-Jecel ayaa ugu dambeyn ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo colaada ka jirta Gobalka J/hoose oo ay ku tilmaameen mid aan faa�iido laheyn.
Amiin Yuusuf Khasaaro, Xamar